Ndị A Na-amaghị | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ndị ọzọ amaghị
Ugboro ole agbụrụ mmadụ dị n'ụwa ... na nke a na-ewere dị ka "Onye ochie na nke siri ike? .......
Ole agbụrụ mmadụ dị n’ụwa… nke a na-ewere ka ọ bụ ya kacha ochie na nke Na-adịgide?… .. Ọsọ a bụ naanị otu ndị ọcha (“tabula-tse”), ndị ọzọ bụ ndị mmadụ hibere site na mmata nke mmadụ niile (ọcha, isi awọ, ojii, ihe nākpu akpu, ndi amighi,…
Osisi Tis ... Ebee ka eto eto na ihe a maara banyere ya?
Osisi Tis ... Ebee ka eto eto na ihe a maara banyere ya? Ọ na-etolite na Carpathians ma mara ezigbo mma. Na Caucasus, dị nso n'obodo Karachaevsk, e nyere ala ala dị larịị n'obodo Shoana. Conifer ...
"MEDUSA OF THE GORGON", onye bụ onye ..? Ndụ na ọnwụ “GORGON MEDUSA”, akụkọ ifo, amụma amụma ..?
"MEDUSA OF THE GORGON", onye bụ onye ..? Ndụ na ọnwụ “GORGON MEDUSA”, akụkọ ifo, amụma amụma ..? A ma aha Gorgon kemgbe oge ochie. Ogologo oge tupu Homer, ndị Greek kpọrọ gorgoneion nkpuchi mascot, nke egosiri na uwe, ...
Kedu snow dị?
Kedu ka snow dị? Redoaktiiki na-acha odo odo na-acha odo odo. Ọcha ga-ekwe omume, mana edo edo adịghị. Nwanyi Bear. Odi n’agu n’ile ya anya. mbụ… Mechie Igha…. Ahụrụ m ...
Kedu ihe nọmba 10 pụtara na nọmba ọgụgụ?
kedu ihe na numerology putara nọmba 10? "Afọ iri, 10, dị ka Pythagoreans si kwuo, bụ ọnụ ọgụgụ kasịnụ, ọ bụghị naanị n'ihi na ọ bụ tetraktis (isi 10), kamakwa n'ihi na ọ na-anabata ihe niile ...
Kedu ihe ị ga-eme iji mee ka nrọ mezuo ma ọ bụ? ? amụma nrọ m ama ama ..
Kedu ihe ị ga-eme iji mee ka nrọ mezuo ma ọ bụ? ? Amụma ndị m nụrịrị .. ihe m ga-eme ka nrọ ahụ mezuo? Ekwula onye ọ bụla banyere ya. Egbula ịkọwa ya. Nghọta ...
Ònye bụ Chi nwanyị Isis, ọ bụ eziokwu na ọ bụ ụdị mama nke Chineke?
Ònye bụ Chi nwanyị Isis, ọ bụ eziokwu na ọ bụ ụdị mama nke Chineke? Isis, chi nwanyị Ijipt oge ochie. Dị ka akụkọ ifo oge ochie, ọ bụ nwa nke chi nke ụwa Hebe na chi nwaanyị nke eluigwe Nuth, yana nwanne ya nwaanyị na di ya n'otu oge ...
Mary Magdalene. Ònye ka ọ bụ?
Mary Magdalene. Ònye ka ọ bụ? Mary Magdalene Mary Magdalin nọgidere bụrụ ihe dị omimi ma dị omimi. N'akụkọ ihe mere eme n'akụkọ ihe mere eme, ọ bụ isiokwu dị iche iche na echiche dị iche iche. Akwụkwọ Nsọ banyere ...
Kedu ihe okike enwere na-anọchi anya ya? Kedu ihe oyiyi nke enwere na Feng Shui?
Kedu ihe okike enwere na-anọchi anya ya? Kedu ihe oyiyi nke enwere na Feng Shui? ihe ngosi nke aghụghọ na nchịkọta Ụba na-anọchite anya aghụghọ na nchedo ọdịda. N'adịghị ka ọdịbendị nke Ebe Ọdịda Anyanwụ, oyiyi nke enwe ...
Olee ụdị okpukpe Rastafarianism?
Olee ụdị okpukpe Rastafarianism? Nke a abụghị okpukperechi, ha butere ihe iji belata ị smokingụ sịga na ndụ ha niile ma ghara ịta onwe ha ụta maka na ha enweghị ezigbo ọrụ, ha enweghị ezinaụlọ.
Kedu ndị Daedra?
Ole ndị bụ Daedra? N'oge opupu ihe ubi, ihe ndị ae kere eke na-eme ihe ike - ha na-anwa tufuo ndị na-agafe agafe-n'ụkwụ, n'ihi na enweghị akwụkwọ zuru oke iji rie. Ochie gara aga, mana ihe ọhụrụ etobeghị. Akwu n'ime oghere, ...
Ònye bụ Ifrit?
Ònye bụ Ifrit? Ifrit (Arab.) Ikike dị ebube na omenala Arab na Muslim. A na-edekarị ya na Otu puku na otu ehihie. Ezi, nakwa ihe ọjọọ, jinn nwere gradations nke ike ha. ...
Ònye kpochapụrụ ọbá akwụkwọ Aleksandria na ihe mere ???
Ònye kpochapụrụ ọbá akwụkwọ Aleksandria na ihe mere ??? Alexandri # 769; library # 769; ị bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ kachasị elu nke oge gara aga. E hiwere ya na mmalite narị afọ nke atọ BC n'oge ọchịchị nke Ptolemy II Philadelphus, eze Ijipt. Na ...
Akụkọ banyere Roses?
Akụkọ banyere Roses? Okpokoro Roses mbụ toro na Asia gburugburu 5000 afọ gara aga. Anụ ọhịa ọhịa na-akawanye nká; ndị mbụ pụtara banyere 35 nde afọ gara aga. Na oge ochie, e weere rose ahụ ...
Forget-Me .... Kedu ụdị okooko osisi a? Ntak emi ẹkotde enye?
Chefue m-obughi… Kedu ụdị ifuru bụ nke a? Kedu ihe kpatara eji akpọ ya? n'ihi na acha anụnụ anụnụ. Na-adọrọ adọrọ, nke nwere acha anụnụ anụnụ dị ka petals turals na odo na-egbuke egbuke, dị ka a ga-asị na e ji ọla edo mee, etiti, echezọ-ọ bụghị - ...
Kedu ndị ghouls?
Ole ndị bụ ghouls? Akụkọ ifo. Na anya ojii na umu akwukwo. Ha na-eripịa ndị mmadụ ma nwee ike ghọọ mmadụ riri ya. N'ụzọ dị mma, a na-egosi ghouls si na anime "Tokyo Ghoul". ndị a bụ ndị…
Ịmụta ịhụ ndị ọzọ n'anya
Ihe na 26.04.2018
O siri ike ịchọta onye na-achọghị ịhụ n'anya ma hụ ya n'anya. Site n'ikike iji nweta mmetụta a na-adabere, ọ bụ na anyị nwere obi ụtọ ma ọ bụ naanị ma ọ bụ na-agwụ site na mmekọrịta dị ogologo. Ọ bụ ...
Gịnị bụ aha Santa Claus na ole n'ime ha?
Gịnị bụ aha Santa Claus na ole n'ime ha? Klas Ndị amara nke Santa Claus na-amabeghị ọha na eze ruo ogologo oge. Maka oge mbụ nnukwu ọdịiche a jupụtara na 1823 ...
Dị ka rose nwaanyị na-ama mma Ma na-esi ísì ụtọ ma dị nro ...?
Kedụ ka nwanyị si daa nwanyị mara mma na-esikwa ike ma dịkwa nro ...? Eeh, mgbe ahuru ya n'anya ma hu ya n'anya…. Eeh, ọ makwara mma ma dịkwa nro, mana ogwu dịkwa ebe ahụ, ha merụrụ .. Igodo…
Na n'ihi gịnị mere ala ọma jijiji?
Na n'ihi gịnị mere ala ọma jijiji? Isi ihe kpatara ala ọma jijiji ahụ bụ nkedo ngwa ngwa nke ụwa dị ka dum n'oge oge plastik (nke na-emebi emebi) nke nkume nkume dị egwu na-elekwasị anya na ala ọma jijiji. Ihe kachasi anya nke ala ọma jijiji ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,513.